ILIFE H70, ilay mpanadio tsy misy tariby tadiavinao | Vaovao Gadget
Rafa Rodríguez Ballesteros | 24/08/2021 18:00 | General, an-trano
Toa somary dingana iray ihany ny "lamaody" an'ireo mpanadio banga mahaleo tena, na tsia. Fa miaraka aminy kosa mamelana karazana mpanadio banga hafa izay manolotra traikefa azo antoka kokoa angamba ho an'ny fanadiovana ao an-trano. Mazava fa ireo mpanadio banga goavambe misy tariby lava dia nidina teo amin'ny tantara. Ary miorina amin'ny tsena izy ireo mpanadio banga tsy misy tariby. Androany isika dia miresaka ILIFE H70.
Fomba fiasan'ny mpanadio banga ho an'ireo izay tsy matoky fa fiara kely lavalava dia mifoka rivotra isaky ny zoron-trano. Tsy lazaina intsony ny fahasamihafana eo amin'ny hery izay hitantsika eo anelanelan'ny «conga» mpanadio «vacuum» ary ny mpanadio «banga». Ho an'ny maro, fitaovana tsara lavitra kokoa hanadiovana tsara ny faritra rehetra amin'ny tranontsika na ny birao.
1 ILIFE H70 ny vahaolana amin'ny fanadiovana ao an-trano
2 ILIFE H70 ho an'ny tranonao
ILIFE H70 ny vahaolana amin'ny fanadiovana ao an-trano
Raha tianao ny mankafy a tontolo madio ao an-trano ary manahy ny amin'ny fanadiovana ho azy ianao, zava-dehibe ny fananana fanampiana betsaka araka izay tratra. Anisan'ireo fahafaha-manao tsy manam-petra izay hitantsika anio eny an-tsena horesahintsika ILIFE H70, mpanadio banga tsy misy tariby, marobe ary manana fahefana mihoatra ny ampy. Mahita sombin-javatra sy kojakoja samihafa izahay isaky ny faritra sy toerana ao an-trano.
Raiso izy Mpanadio banga ILIFE H70 ny vidiny tsara indrindra
Miankina amin'ny loto sy ny karazan-tany azontsika ampiasaina karazana hery suction roa. Ny fahefana ara-dalàna, izay ilaina amin'ny toe-javatra rehetra miaraka amin'ny hery suction 10 Kpa. Na azontsika atao ny mampihetsika ny maody indrindra izay ahazoantsika hery hisoka mihoatra ny avo roa heny amin'ny 21 Kpa, ka tsy misy sombin-tany na vovoka azo hanoherana.
Misaotra anao moto mahery tsy matanjaka Ho azontsika amin'ny fomba mangina indrindra ny hery ilaina rehetra. Manisa isa kaontenera maloto tsy misy fangarony miaraka amin'ny fahafaha mahatratra 1,2 litatra. Ary ny azy rehetra ny faritra azo esorina sy azo sasana na eo amin'ny fanasana vilia aza. Ny endriny elongated sy ny tahony ergonomika dia ahafahantsika mamoaka ny gorodona amin'ny fomba lavorary, fa koa ny sehatra mitsivalana na koa ny valindrihana.
ILIFE H70 ho an'ny tranonao
Ny iray amin'ireo antsipiriany lehibe tokony harahina rehefa te hanana mpanadio banga isika dia ny fahaleovan-tena afaka manolotra antsika. Ny ILIFE H70 dia miaraka amin'ny batterie 2500 mAh. Fiampangana hahafahanao anay mampiasa mitohy hatramin'ny 40 minitra amin'ny maody "normal". Ary inona no azontsika atao? 1% voasazy indray ao anatin'ny 5 ora latsaka.
ny kojakoja ho an'ny karazana fanadiovanaa, ary koa ny fahalemen'ny lohany rakotra fitaovana tsy manimba fanaka na rindrina, ataovy fitaovana farany. Mihodina hatramin'ny 180 degre ary ny seza na ny tongotry ny latabatra dia tsy avela ho voaloto. Izy io aza dia manana jiro misy jiro LED ho an'ireo zorony izay tsy dia fahita firy.
Raha ny ILIFE H70 madio tsy misy tanany tariby madio tanana no tadiavinao ataovy ho anao amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny Aliexpress tsy misy sarany fandefasana. Aza miandry intsony ny fahadiovan'ny tranonao araka ny tokony ho izy. Ary misy izany ny fitaovana fanadiovana farany tsy mila mandany mihoatra ny ilaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » ILIFE H70, ilay mpanadio tsy misy tariby tadiavinao